भ्यालेन्टाइन विशेष: तिमीलाई यो खुला प्रेम पत्र « KathmanduPati
भ्यालेन्टाइन विशेष: तिमीलाई यो खुला प्रेम पत्र
प्रकाशित मिति : २०७६, २ फाल्गुन शुक्रबार १०:४३
नारायण पौडेल/काठमाडौं – यो पत्र लेख्दै गर्दा रोला बार्थलाई सम्झिरहेको छु । उनी भन्छन्ः लेखन सकिएपछि पाठकको जन्म हुन्छ, पाठकको जन्मसँगै लेखकको मृत्यु हुन्छ । यो पत्र तिम्रो हात पर्दा रोला बार्थ रोइलो गर्न सक्नेछन् । तिम्रो उपस्थितिमा बार्थले मेरो मृत्यु देखाइहाले पनि म जोन डोनसँग सहयोगको याचना गर्ने छु । मृत्यु भइसकेको फिनिक्स चरीलाई ब्युँताएर गज्जबको समायोजन गराउने क्षमता उनीसँग छ । उनकै सहयोगमा फिनिक्स चरी झैं हामी दुईको समायोजन गराउने छु ।
‘नाममा के छ ?’ सेक्सपियरले शताब्दीँऔं अघि गरेको प्रश्नले मलाई चिमोटी रहन्छ । किताब भनेर हातमा लियो, तिम्रो तस्बिर देख्दछु । पत्रिका, समाचार होसकी विचार जहाँपनि तिम्रो उपस्थिति, के सेक्सपियरको कहावतसँग ठ्याक्कै मेल खादैन र ? ससुर अघि शब्दलाई नामकरण गर्ने साधनको रुपमा लिइन्थ्यो । उनिपछि शब्दसगैं अर्थलाई स्थान दिइएछ । यदि मलाई अनुमति हँुदो हो त भन्दो हुँ शब्द सांसारिक सारथि हुन् , मनलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हुन् । दुई मन र मानिस बिचका समायोजक हुन् । भरोसा छ शब्दहरु दाहिने हुनेछन् र हाम्रो भलो गर्नेछन् ।
डेरिडासँग मलाई डर लाग्छ, कारण उनि शब्दमा सत्यता होइन भ्रम जेलिएको देख्दछन् । एक कदम रोकिएर उनि निरीहता प्रर्दशन गर्दै भन्दछन्– जे भनिए पनि सत्यको सम्भाबना शब्दबाट मात्र सम्भब छ । मेरो यो सत्यसंगी खोज्ने प्रयास डेरिडाका डेडा आँखाबाट पार पाउन् र भ्रममा परिणत नहुन्, प्रभुसँग मेरो प्रार्थना छ । बरु प्रभुको मृत्युको घोषणा फिर्ता लिन निच्स्सेलाई निसन्देह अपिल गर्नेछुृ ।
कहिले काहीं सिद्वान्त मेरैलागि लेखिएका हुन् झैं लाग्छ । रेने डिकाटिजले ‘कोगिटो इर्गो सम अर्थात म सोच्दछु त्यसैले म छु ’ भन्दछन् । सोच्नु भनेको मानसिक चाल हो । मलाई शंका लाग्दछ, म छु वा छैन । म तिमीबारे मात्र सोच्दछु । मेरो मुटुवरीपरि कफ्यू लगाउने मेरो प्रयासलाई अबज्ञा गर्दै तिमीले परेड खेलेको पत्तै पाएनछु ।
म तिम्रो परेडमा इमानुयल कान्टले भने झैं ‘सबलाइम’ पाउँदछु, र त निषेधित क्षेत्रभित्रको तिम्रो अर्कमण्यतालाई आत्मसाथ गर्दछु । आफ्नो यात्रालाई उद्देश्यविहिन उद्देश्य अर्थात ‘पर्पोसिपनेस विदआउट पर्पोस’ भएको मान्दछु । यद्यपी म कठ्याग्रिंन्छु जब लन्जाइनस ‘फल्ससवलाइम’को वकालत गर्दछन् । अँह मेरो महानन्द झूठानन्द हुन सक्दैन ।
होरेसका कुराले हरेस नखान प्रेरित गर्दछ । तिमी आफैंमा ‘डेकोरम’को नमुना बनेकी छौं, सबै कुरामा संगति र सामञ्जस्यता । सिड्नीले कविता वा कलाको वकालत गर्दाको शैली मैले सापट लिएको होइन । तिमी प्लेटोको दार्शनिक संसारजस्तै (आइडल वल्र्ड) स्वंयसिद्व छौ । म अरिष्टोटलले परिभाषित गरेको कलाकार होइन जसले प्रकृतिलाई पूर्णता दिन सकोेस ।
म त आफैंमा अपूर्ण छु र तिम्रो साथमा पूर्ण हुन खोज्दैछु । अरिष्टोटल दुखान्त अर्थात ट्राजेडीलाई बास्तबिक कला मान्दछन् । हाम्रो सम्बन्धको दुखान्त भएमा एरिस्टोटलबादीहरु रमाउनेछन् । एरिस्टोटलले सिमान्तकृत बनाएको सुखान्तलाई हामीले हरहालतमा साथ दिनुछ । र, पुष्टि गर्नुछः सीमान्तकृत सुखान्तको स्वाद । स्टेफन ग्रीनब्लाटले भित्राएको ‘न्यूहिस्टोरिसिजम’को मर्मपनि त्यहीनै हो जस्तो लाग्दछ ।
तिमी इन्द्रेणी जस्ती सबभन्दा सुन्दर सृष्टिजस्ती देखिरहँदा म भने आफूलाई टी एस एलीएटले ब्याख्या गरेकोे ह्यामलेट जस्तो पाउँछु । तिमीलाई थाहै छ सेक्सपियरको महान कृति ह्याम्लेटको मुख्य पात्रको कन्तबिजोग । एलिएट ह्याम्लेटमा ‘अब्जेक्टिभ कोरिलेटिभ’ अर्थात वस्तुगत संगतीको अभाव देख्दछन् । एलिएटका लागि ह्यामलेटको कमजोरी भनेको उसको योजना र कार्यान्वयनमा देखिने पृथकता हो । आफ्नै देवरसँग पोइलजाने आमालाई ह्याम्लेट घृणा गर्छ तर व्यक्त गर्न सक्दैन ।
उता बाबुको हत्याको बदला हत्यारा काकाको हत्या गरेर लिने उसको भित्री ताकेता रहन्छ । तर कैयौं अवसरहरुलाई सारहीन बनाउँदछ । ऊ जे सोच्दछ त्यो गर्न सक्दैन तरपनि सोच्न छाड्दैन । यता म तिम्रो प्रेम–संसारको कल्पनामा रमाइरहें । मनमनै तिमीसँग कति दुखसुख साटीरहें । तथापी भेटमा औपचारिक हाइहेलो भन्दा बढी गर्ने साहस जुटाउन सकिनँ । म जे छु त्यो देखिन सकेको छैन जसरी ह्यामलेट देखिएको थिएन । आज भने आँट गरेको छु । ह्याम्लेटजस्तो योजना अन्तिममा टुक्राउने नियती यो आँटले ब्योहोर्न नपरोस् ।
सम्बोधनमा कुनै शब्द परेका छैनन् । ससुर तर्क गर्दछन् खाली ठाऊँमा अर्थ लुकेको हुन्छ । हेगेल विपरितहरुको सम्झौंतामा जोड दिन्छन् । सम्झौंता पछि शब्दको समागमन हुनेनै छ । यो प्रेमपत्र साना दुःखले लेख्या होइन, आगे तिम्रै मर्जी ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियाबारे ईश्वर पोखरेल भन्छन्ः खान पल्केकाले विरोध…
काठमाडाैं – नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत
कडा निर्णय लिने स्थिती नआओस्, आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौँ: अर्थमन्त्री…
काठमाडौं – डा. युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने
चीनबाट ल्याएका सामानमा अनियमितता भएको छैन्, केही तप्काले विरोध गरेः…
काठमाडौं – विश्वका अधिकांश सरकार र नागरिक विश्वका प्रायः सबै
ए सरकार भनिदेउ, हामी कसरी ढुक्क होऔं
दीर्घराज उपाध्याय/काठमाडौं – सुदूर पश्चिमसंगै पुरै देश कोरोनाको सन्त्रासमा थियो